Top Awesome Android Games Ị Mkpa Iji na-agbalị
Onye ọ bụla gburugburu bụ ihe àmà nke eziokwu ahụ bụ na Android egwuregwu na-azụ ha ahịa uru kwa ụbọchị. E nwere ụfọdụ ndị na-apụghị egwu dị otú ahụ àgwà egwuregwu na ala price. Ma unu na-na-adịghị na agonize mgbe niile n'ihi na anyị na-aga na efere si top 10 free Android egwuregwu.
Nke a free Android egwuregwu bụ ihe niile banyere eri ma ọ bụ ga-eri. Ị na-ewere akara nke obere cell na-eri Player si n'ụwa nile na-ike kacha ike.
Nke a free Android egwuregwu n'ihi na mbadamba bụ adịghị agwụ agwụ na-agba ọsọ egwuregwu na nke ị ga-ewere akara nke ọkacha mmasị gị minions na-erigbu ụwa nke ọhụrụ Obere egwuregwu.
3. nchọgharị ụzọ ụgbọ oloko
Nke a free Android egwuregwu bụ kpara egwuregwu na-adịghị agwụ agwụ na-agba ọsọ na-etoju. Ihe mgbaru ọsọ gị bụ na-agba ọsọ dị ka ngwa ngwa dị ka o kwere ma na ị nwere izere obstacles.This egwuregwu bụ otu n'ime ndị kasị eri ahụ egwuregwu.
Nke a free Android egwuregwu bụ banyere na-elekọta gị Pita. Pou na-abịa ná mpụta ohere na ị ga-eri nri ya na-egwu ya.
5. My Ịgwa Tom
Nke a free Android egwuregwu bụkwa banyere anu ulo. Na egwuregwu a na ị nwere na-elekọta na-eto eto obere kitten na ọ ga-eto eto onye okenye cat.This egwuregwu jupụtara ụtọ na i nwere ike jidere egwuregwu a site na njikọ.
Eminent franchise si na kọmputa nkà na-eru nso gị mbadamba na-enye gị na ohere nka gị mbụ odide, rụọ ha n'ebe obibi ha, ha na-ada na ịhụnanya, nwere ụmụ ọhụrụ ma ọ bụ ndụ ndụ ha na agbanyeghị ị chọrọ.
Akụkụ nke abụọ nke Temple Run agbanwewokwa echiche mobile egwu ya edekọ. Nke a adventurous free Android egwuregwu bụ adịghị agwụ agwụ na-agba ọsọ egwuregwu na nke ị nwere na-awụlikwa elu, gbanwee na slide site n'oké ọhịa na ndị niile mines. Ị nwere ike nwalee gị na-agba ọsọ ike nanị site nbudata egwuregwu a si download njikọ.
Egwuregwu a bụ ihe niile banyere ịchịkwa a agụụ na-agụ shark na-eri ihe niile na-abịa ya ụzọ.
9. My Ịgwa Angela
Nke a free Android egwuregwu n'ihi na mbadamba bụ ọzọ a Pita egwuregwu na nke i nwere ohere nke inye ihe ịrịba ndụ a kitten Angela. Unu na-eme ya a Superstar, na-eri nri ya na-eji ejiji ya elu.
Top 10 ugwo Android Games
1. Minecraft n'akpa uwe mbipụta
Anyị chee na ị ụwa kasị ewu ewu egwuregwu nke bụ na-egwuri na gị Android mbadamba. Egwuregwu a bụ kpam kpam ihe adventurous egwuregwu na okike ụdịdị.
A na-akpali egwuregwu bụ ihe niile banyere enyere a Taylor onye jiri on ọnwa na ọ na-amaghị ebe izu ike ya nke ndi oru ugbo bụ. Ya mere, ị bụ naanị na ọ nwere ike iru na-ekwurịta okwu.
3. Monsters Rie My ọmụmụ achicha
Nke a adventurous Android egwuregwu bụ ihe niile banyere na-achọ Niko ụbọchị ọmụmụ achicha na na Itie oge ọ na-aghọ a ozi ịzọpụta Gogapoe Island, na ụmụ mmadụ na nnukwu anụ ndụ ọnụ.
4. jiometrị Dash
Nke a Android egwuregwu n'ihi na mbadamba bụ mfe na-amụta ma ike egwu. Nke a dị mfe egwuregwu bụ ihe niile banyere jumping n'ebe ize ndụ.
Nke a Android egwuregwu bụ ihe niile banyere ewu elu, buru kasị mma upgrades, na-pụrụ iche mmadụ na-egbu ọ bụla Bloon na-agba mbọ na-emeri gị ụlọ elu.
A magburu onwe Android egwuregwu na-ukwuu too site akatọ. Na egwuregwu a na ị nwere aka Maxwell n'idozi egwuregwu mgbagwoju anya. Egwuregwu a bụ kacha fun niile afọ.
7. Ncheta Valley
Nke a Android egwuregwu bụ ihe niile banyere ngagharị ọhụrụ fun na nke ị na-enwe na-eduzi nkịtị Princess.
Na egwuregwu a, onye ọ bụla planet nwere ya ọhụrụ, ma ọ bụ na agwaetiti dị anya site na mbara igwe ma ọ bụ ifo. Ị ga-a njem iji ụzọ niile ma hichapụ villains na-egosi na a sandbox edinam njem.
Ahịa: $ 1.11
Egwuregwu a na-ada ebube maka ndị chọrọ iwu ihe ọ bụla. Egwuregwu a bụ ihe niile banyere ịchịkwa 14 ụlọ igwe mbụ e mere nke nnukwu ewu na saịtị dị ka igwu ọdọ mmiri ma ọ bụ obodo saịtị.
10. The ime ụlọ
Nke a bụ mara mma mgbaghoju anya egwuregwu na ga-anwale gị n'uche.
Ndị kasị ewu ewu Game Download weebụ na saịtị
Ọfọn kasị amasị egwuregwu download saịtị bụ Google Play ụlọ ahịa. Ị nwere ike achọpụta ọ bụla ụdị Android egwuregwu ị chọrọ. Ndị chọrọ na-egwu ma ike izute mmefu nke na-akpọ àgwà egwuregwu kwesịrị ịga leta saịtị a n'ihi na nke a bụ nanị na saịtị nke na-enye gị àgwà egwuregwu na na kwa free nke na-eri. Nke a na saịtị bụ ebe kacha mma inyocha Racing egwuregwu, Ọgụ egwuregwu, Okenye egwuregwu, Strategy egwuregwu na ọtụtụ ndị ọzọ. Unu na-enwe nsogbu n'ihi na anyị na-aga na-ewetara gị na ukara njikọ nke a website nke mere na ị kwesịrị ị na kwụpụ n'ime ụwa nke fun na njem ma zuru ike gị uche. Nyere n'okpuru bụ ukara njikọ nke a website.
> Resource> Game> Top Awesome Android Games I Kwesịrị Iji Gbalịa